အလွန်မတ်စောက်သော ပေ၁၇၀၀ ခန့်် ချောက်မှာတွေ့ရသော မစိမ့်ထက်ရဲ့ အပေါ်အကျီင်္ကို ဆင်းယူခဲ့သူရဲ့ ပြောပြချက်တွေ
May 14, 2019 Cele Love 0
အလွန်မတ်စောက်သော ပေ၁၇၀၀ ခန့်် ချောက်မှာတွေ့ရသော မစိမ့်ထက်ရဲ့ အပေါ်အကျီင်္ကို ဆင်းယူခဲ့သူရဲ့ ပြောပြချက်တွေ ဖန်ဂရန် ရာဇီ ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေမတော်တဆပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေသော မစိမ့်ထက်အားရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ်ရှာဖွေခဲ့ခြင်းပေါ်အင်တာဗျူး …. မေ ၁၃ ရက် ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်မတိုင်မီ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ကThe Summiter လို့ခေါ်တဲ့အပျော်တမ်းခြေလျင် တောင်တက်အဖွဲ့ဟာ […]
အသက်​က ၁၄ နှစ်​ ​မွေးထားတဲ့ က​လေးက ၂ လ​ ပြုကျင့်သွားသူက HIV ပိုးရှိသူ
အသက်​က ၁၄ နှစ်​ ​မွေးထားတဲ့ က​လေးက ၂ လ​ ပြုကျင့်သွားသူက HIV ပိုးရှိသူ သမီးငယ်​​ရေ – အားမငယ်​နဲ့ - စိတ်​မ​လျော့လိုက်​ပါနဲ့ နော် …. ။ ဒီည​နေ သမီးငယ်​နဲ့ ဗွီဒီယို call ​ခေါ်ပြီးစကား​ပြောဖြစ်​​တော့ သမီးငယ်​မျက်​နှာကအပြစ်​ကင်းလှတယ်​ – […]
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရနိုင်ဖွယ်​ရှိ အများပြည်သူများသိစေဖို့ငလျင်ဒဏ်သတင်းကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ် …. ။ ပထမဦးစွာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘာကြောင့်ငလျင်လှုပ်ရလဲဆိုတာမှာအကြောင်းကြီးနှစ်ချက်ရှိနေပါတာဖြစ်ပါတယ် …. ။ (၁) အိန္ဒိယနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရွေ့လျားလာတဲ့အိန္ဒိယပြတ်ရွေ့မြေထု။ (၂) စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့လျားနေတဲ့ပြတ်ရွေ့မြေထု။ စတဲ့အကြောင်းကြီးနှစ်ချက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာငလျင်များလှုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုVOA သတင်းဌာနမှဒေါ်ခင်မျိုးသက်မှမေးမြန်းအင်တာဗျူးထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီနာယကဒေါက်တာဦးသိန်းဖြေကြားထားပါတယ်။ ငလျင်ဒဏ်အများဆုံးခံရဖွယ်နှင့်အပြင်းထံဆုံးခံရဖွယ်ဧရိယာများအနေဖြင့်ပြောကြားသွားရာမှာ– (၁) မန္တလေးးတိုင်းအရှေဘက်ခြမ်း (၂) ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ဘက်ခြမ်း (၃) ချင်းတောင်တန်းမြောက်ဘက်ခြမ်း/ စစ်ကိုင်းတိုင်းမြောက်ဘက်ခြမ်း စသည့်ဧရိယာများဖြစ်ကြပြီးအန္တရာယ်များနှင့်လည်းကြုံရဖွယ်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ် …. ။ […]
ရာသီခွင်တွေထဲမှာ “ခပ်ချေချေ” အဖြစ်ဆုံး ရာသီခွင် (၅) ခု
ရာသီခွင်တွေထဲမှာ “ခပ်ချေချေ” အဖြစ်ဆုံး ရာသီခွင် (၅) ခု တချို့တွေက အရမ်းမချေတတ်ဘဲ သဘောကောင်းသလို တချို့တွေကတော့ အရမ်းချေတတ်ကြပါတယ်။ ချေတယ်ဆိုတာ မာနကြီးတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ တချို့ချေတဲ့သူတွေကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ တခြားသူအပေါ် ချေလိုက်မိသလို ဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ မွေးရာပါအချေပါ။ ဒီလိုမျိုး ခပ်ချေချေအဖြစ်ဆုံး ရာသီခွင်တွေကတော့ […]
ထောင်ကနေ လွတ်ငြိမ်းနဲ့လွတ်လာသူ ၂၄ နာရီအတွင်း မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန် …
ထောင်ကနေ လွတ်ငြိမ်းနဲ့လွတ်လာသူ ၂၄ နာရီအတွင်း မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန် … မေလ ၁၁ ရက်နေ့ က ဘုရင့် လွှတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့စူလဌာနီ အကျဉ်းထောင်ကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လေ၀ပ် ဟာစ၀မ် အသက် ၃၄ နှစ် ဟာ … ၂၄ နာရီအတွင်း […]
လူတွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ချီးကျူးမခံရသူ အမေ့လျော့ခံ မြန်မာပိုင်းလော့တဦး
လူတွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ချီးကျူးမခံရသူ အမေ့လျော့ခံ မြန်မာပိုင်းလော့တဦး မေ့လို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ …. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမဖြစ်မီ မြန်မာ့လေကြောင်းခေတ် ကျွန်တော် Fokker-27 (ယခုပြည်သူ့ ဥယျာဉ်ထဲကလေယာဉ်) Copilot ဘဝက လေယာဉ်ဘီးချမရတဲ့ အလားတူ Case မျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Captain က ကျွန်တော့်ဆရာ […]
မိုးရွာထဲမှာ မိမိရင်သွေးကို ထီးသဖွယ် လုပ်ဆောင်းပြီး ပြေးလွှားနေတဲ့ မိခင်စိတ်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ဗီဒီယိုဖိုင်
မိုးရွာထဲမှာ မိမိရင်သွေးကို ထီးသဖွယ် လုပ်ဆောင်းပြီး ပြေးလွှားနေတဲ့ မိခင်စိတ်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီး ဗီဒီယိုဖိုင် မိုးသည်းနေတဲ့ မြို့လယ်ခေါင် လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ရင်သွေးငယ်လေးအား ထီးသဖွယ်လုပ်၍ဆောင်းပြီး အော်ဟစ်ပြေးလွှားကာ အကြင်တရားကင်းမဲ့လွန်းလှတဲ့ မိခင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ အကြီးတန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်နော် …။ ဒီဖြစ်ရပ် ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ အနီးနားရှိ ကားပေါ်မှ အမျိုးသားတဦးက ရိုက်ကူးယူထားတာဖြစ်ပြီး […]
အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၈၁/၄ ၊ နန်းထိုက်တော်ဝင် EXPRESS ကားကြီး တိမ်းမှောက်မှု ရုပ်သံ
အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၈၁/၄ ၊ နန်းထိုက်တော်ဝင် EXPRESS ကားကြီး တိမ်းမှောက်မှု ရုပ်သံ အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်၁၈၁/၄ ၊ နန်းထိုက်တော်ဝင် EXPRESS တိမ်းမှောက် ရုပ်သံ ၁၄.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ၁၁း၂၅ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၈၁/၄ မိုင်အနီးတွင် […]
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း..
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း.. ဆံပင် တစ်ခါမှ မဖြောင့်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆံပင်က ဖြောင့်ထားတဲ့ သူတွေလို ပျော့တယ် ဆံသားပြောင်တယ် စင်းတယ် …။ ဘာမှမလုပ်မှတော့ ဘယ်ပျက်ဆီးမလဲ လို့တော့မထင်နဲ့ ဆံပင် ဆေးဆိုးတာတော့ ရက်ရက်စက်စက် ဆိုးတယ် အရောင်မကြိုက်ရင် တစ်လတည်းကို […]
ကနဦး သတင်း စာသင်​ခန်းအတွင်း မှ က​လေးအ​ယောက်​ ၂၀ ခန့်ရန်​ကုန်​အ​ရေး​ပေါ်ဌာနသို့ ​ရောက်​ရှိ
ကနဦး သတင်း စာသင်​ခန်းအတွင်း မှ က​လေးအ​ယောက်​ ၂၀ ခန့်ရန်​ကုန်​အ​ရေး​ပေါ်ဌာနသို့ ​ရောက်​ရှိ က​လေးအ​ယောက်​ ၂၀ ခန့်ရန်​ကုန်​အ​ရေး​ပေါ်ဌာနသို့ ​ရောက်​ရှိ – စာသင်​ခန်းအတွင်းမီးခိုး​ငွေ့ ဝင်​ကာ မူး​မေ့သတိလစ်​တာပါ …. ။ ကနဦး သတင်းအရသမိုင်းမုဒိတာ အိမ်​ရာနားကစာသင်​​ကျောင်းလို့ သိရပါတယ် …. […]